Fiangonana Loterana Malagasy eto Montpellier / Eglise Luthérienne Malgache de Montpellier
" Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany." Lioka 1, 14 Miarahaba anao sy ny ankohonanao tratra ity Noely 2020 ity. Mirary krismasy sambatra homban'ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika! Ny Pastora
Fankalazana ny Noely
Miarahaba Anio 24/12/2020 amin'ny 8 ora alina ny fotoam-pivavahana, arahina fankalazana ny sasa-kalina sy fizarana vatomamy, fanomezana ireo zanantsika ary ho faranana amin'ny fizarana bûches avy amin'ny Fiangonana. Ny 25/12/2020 kosa dia hanomboka amin'ny 10h30 ny fotoam-pivavahana fankalazana ny Noely izay hisy fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Tsahivina ihany koa fa hisy ny valopin'ny Noely. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy.
Fampatsiahivana vetivety ihany. Hatomboka @ 11ora ny cultentsika rahampitso 20/12/2020 izay hotanterahana ao amin'ny Salle Tourrière 14 Rue des Escholiers 34430 Saint Jean de Vedas Iangaviana isika miandraikitra ny fitondrana ny entan’ny fiangonana mba ho tonga mialoha amin'ny fandaminana. Misaotra mialoha. Ny Tompo hitahy.
SALOMA Alahady 20/12/2020
Miarahaba antsika rehetra tompoko, indrindra ny SALOMA zay antsoina mba ho tonga ny Alahady 20 Décembre ho avy zao. Toa izao ary ny programatsika : * fidirana amin'ny 10 ora eny amiin'ny Salle Tourriere St Jean de Védas - 1) fianarana teny malagasy hosahanin'i Ramatoa Domoina - 2) fianarana Sekoly Alahady (fanomanana ny Krisimasy) - 3) faranantsika @ vokatra ao aorianan'ny culte. Mangataka ny fitondrantsika am-bavaka izany fikasana rehetra izany tompoko dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Lanto, Filoha SALOMA
Miarahaba antsika Fiangonana @ anaran i Jesosy. Araka zay voalaza tamin ny filazan-draharaha tamin'ny Alahady lasa teo dia mampahatsiahy antsika fa hisy vokatra hatao ny Alahady 20/12/20 ho fanohanana ny SALOMA. Mitaona sy manantena antsika àry @ fandraisana anjara. Raisina an-tanandroa na ny vokatra havadika ho vola na solom-bokatra tompoko. Mirary ny fiadanan i Jesosy ho @ tsika rehetra. Lanto, Filoha SALOMA
Araka ny efa nolazaina t@ vaovaom-piangonana t@ alahady teo moa dia mikasa ny hizara Buches de noel amintsika mpiara-mivavaka ny fiangonana ny alin’ny 24/12, aorinan’ny fizarana ny bonbons sy cadeaun’ny ankizy. Koa momba an’izay dia ilaina ny fisoratantsika anarana ho an’ireo izay mikasa ny ho tonga amin’io 24/12 io ahafahana manisa ny buches tokony ho vidiana. Manasa antsika mba handefa sms @ 06 29 78 16 29 sy milaza izay parfum mety aminy (Forêt noire, Chocolat, Framboises, Tiramisu, Crème de marrons d’Aubenas). Mila atao mialoha ny commande koa dia ny Alakamisy 17/12 ho avy izao no fotoana farany isoratana anarana. Misaotra antsika rehetra. Ny Tompo hitahy.
Culte sabotsy 12/12/2020
Mampatsiahy antsika rehetra fa hisy ny culte (fotoam-pifohazana) izay tarihin'ny mpiandry, koa manasa antsika hanatrika izany.Tanterahina ao amin'ny application Jitsi Meet manomboka amin'ny 20h ny sabotsy 12/12/2020 ho avy izao. Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra!
Culte sabotsy 28/11/2020
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ! Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra hanatrika ny culte sabotsy hariva (tarihin'ny fifohazana) zay manomboka amin'ny 20h. Nahemotra ho amin'ny 20h satria hita fa tery ny fotoanan’ny KTLM. Hamafisina etoana koa fa ny fivoriana (étude biblique) KTLM dia manomboka amin'ny 18h30 io sabotsy hariva io ihany. Ao amin'ny application Jitsi Meet araka ny mahazatra. Manantena antsika rehetra!
" Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro." Hebreo 10, 25 Ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Montpellier dia mikatona mandritra izao fihiboana izao. Ny fotoam-pivavahana kosa dia hatao amin'ny application Jitsi meet isan'alahady manomboka amin'ny 11 ora, ka dia anasana antsika rehetra hiara-miombom-bavaka mandritra izany fotoana izany. Indro ny fifandraisana raha toa ka mila fanazavana fanampiny: Ny Filohan'ny Fiangonana : 0629781629 Manao veloma homban'ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompotsika
VAOVAO / NOUVELLES
NY FIANGONANA / L' EGLISE
FIVAVAHANA / CULTE
FAMPIANARANA / EDUCATION
FIFANDRAISANA / CONTACT
Topimaso / Archives
septembre 2021 6